USA: Donald Trump oo wajahaya baaritaan xilka looga qaadi karo – Kasmo Newspaper
USA: Donald Trump oo wajahaya baaritaan xilka looga qaadi karo
Updated - June 15, 2017 1:07 am GMT
London (Kasmo), Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, waxaa ku socota baaris la xiriirta in uu is-hortaagis ku sameeyay caddaaladda, markii uu shaqada ka eryay, madaxii hore ee FBI, James Comey, arrintaas oo qayb ka ah qalalaasaha la magac baxay “Russiagate”.
Wargayska Washington Post ayaa qoraya in La-taliyaha gaarka ah ee loo xilsaaray baaritaanka xasaradda Russiagate, Robert Muller, durba su’aalo weydiiyay qaar ka mid ah madaxda Sirdoonka, si loo xaqiijiyo in Madaxweynuhu sharciga ku sameeyay xadgudub iyo in kale.
Donald Trump ayaa Comey ka fariisiyay shaqada isaga oo uga dan lahaa in la joojiyo baaritaan FBI ku samaynaysay xiriirka ka dhexeeya ololihiisii doorashada Madaxweynaha iyo Russiya.
Wararka waxaa intaa dheer in Muller (oo qudhiisu ahaan jiray Agaasimaha FB I) baaritaan ku wado dunuub dhanka maaliyadda ah oo ay galeen xitaa shakhsiyaad ku dhow Aqalka Cad ee Madaxtooyada.
Baaritaannada weerarkii Internetka ee lagu xiriirinayay Russiya looguna dhacay kaydadka sirta Xisbiga Dimuqraadiga, waxaa la bilaabay xagaagii hore, waxaana loola jeeday in la hubiyo jiritaankooda iyo in ay ku beegnaayeen Ololihii doorashada Trump.
Baaritaanka Trump wuxuu ka dhiganyahay qalalaasihii oo cirka isku shareeray, haddii Muller dunuub ku helana wuu ku soo oogi karaa, ama eedaha ayuu u gudbin karaa Congress-ka, si xil ka-qaadistiisa “Impeachment” loo bilaabo.